ओक्सटोकिन एसीटेट बारे सबै कुरा
1। ओक्सटोकिन एसीटेट के हो?
2। कार्यको ओक्सटोकिन एसीटेट तंत्र
3। के ओक्सटोकिन महिलाहरूमा मात्र उपयोगी छ?
4। ओक्सटोकिन एसीटेट फायदाहरू
5। ओक्सटोकिन साइड इफेक्ट्स
6। के ओक्सटोकिन तपाईंको लागि सुरक्षित छ?
7। अन्य ड्रग्स जो ओक्सियोसिइन एसिनेट को प्रभावित गर्न सक्छ
8। प्रशासन र खुट्टाको ओक्सटोकिन एसीटेट मोड
10। मलाई अक्सिटोन एसीनेट कहाँ पुग्न सक्छु?
गर्भधारण, जन्म, र भावनात्मक सम्बन्धमा हार्मोनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, ओक्सटोकिन Acetate वास्तविक सम्झौता हो। यस लेखले ओक्सटोकिन फाइदाहरू, साइड इफेक्ट्स, र जहाँ तपाइँ यसलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ को केहि प्रकाश बहाउनेछ।
1. ओक्सटोकिन एसीटेट के हो?
वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरको बारेमा जान्न बढी प्रयास गरिसकेपछि, यो हार्मोन जस्तै कि हार्दिक रूपमा स्पष्ट हुन्छ भनेर स्पष्ट हुन्छ ओक्सीटोकिन एसीटेट जसले अर्को तिरको भावनालाई असर गर्छ। प्रेम एक धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हुन जान्दछ जुन केहि वा कसैको व्यवहारमा असर गर्दछ। दिलचस्प छ, यो सबै एक, स्वाभाविक रूप देखि भएको हार्मोन द्वारा उत्पन्न हुन्छ जुन सबै भावनाहरु र आवेगहरुलाई प्रभावित गर्दछ।
सामान्यतया cuddle रासायनिक वा प्रेम हार्मोनको रूपमा चिनिन्छ, ओक्सटोकिन सबैभन्दा शक्तिशाली औषधीको रूपमा दर्जा गरिन्छ जसले भावनाहरू बढाउँछ। ओक्सटोकिन एक औषधि हो र हार्मोोन जुन हाइपोथेमस मा उत्पादन गरिन्छ र पिट्यूटरी ग्रंथिले रक्तचापमा लुकेको छ। यसको स्राव हाइपोथोमस मा पाइने न्यूरोन्स को विद्युत गतिविधि द्वारा प्रभावित छ। उदाहरणको लागि, एक पटक हाइपोथोमस को कोशिकाहरु उत्साहित हुन्छन्, ओक्सटोकिन उत्पादन र यसको विपरीत।
2. कार्यको ओक्सटोकिन एसीटेट तंत्र
(1) ओक्सटोकिन र भावनाहरू
शोधकर्ताओं ले स्थापित गरेको छ कि ओसीयोटोसिन एसीटेट को सुख को क्षण को समयमा उपयोगी छ। स्वाभाविक रूप देखि, यो हार्मोन क्षणों को समयमा बहुतायत मा पाएको छ जस्तै एक आत्मा साथी देखि गले लग रहेको छ, एक अलग या एक नै लिङ्ग को दुई मान्छे को बीच एक पहिलो स्पर्श जो एक दूसरे को आकर्षित हो। ओक्सटोकिनलाई खुशीको भावना सिर्जना गर्दछ र यसैले खुशीको कार्यहरू दोहोर्याउनको भावना सिर्जना गर्दछ। यो मस्तिष्क संकेतहरू को बदलन मा शामिल छ कि गैर मौखिक संकेतों को अभिव्यक्ति जस्तै चेहरे अभिव्यक्ति को नियंत्रित। यो प्रक्रिया, सम्भवतः भावनात्मक उत्तेजनाहरूको प्रक्रिया गर्ने अमिग्दला सङ्केतहरूको परिवर्तन गरेर।
(2) ओक्सटोकिन र श्रम
ओक्सटोकिनले अन्य कारकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर श्रमको तन्त्रणामा योगदान गर्दछ। यसले शुरुवात र मानिसहरूमा श्रमको पूरामा भूमिका खेल्छ। बच्चाको निकासीको समयमा, ओक्सटोकिनको स्तरमा महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुन्छ। यसबाहेक, त्यहाँ उल्लेखनीय वृद्धि छ ओक्सीटोयोन स्तर महिलाहरुमा पलटाइल र ठेकेदार परिवर्तन को लागी जिम्मेदार हुनुहोस्। आइसटोकिन जुन स्थानीयमा प्लास्पेमा उत्पादन गरिन्छ श्रमको तंत्रको लागि जिम्मेवार छ। क्यान्सरको समयमा उल्लेखित ऑक्सटोकिन कार्य पनि रिसेप्टरहरू हुन्।
यसबाहेक, यी रिसेप्टरहरूको संवेदनशीलता श्रममा अगाडि वा अवधिमा बढेको छ। त्यहाँ uterus मा मांसपेशियों को अनुबंधित प्रभाव को समन्वय गर्न को लागि, गर्भाशय कोशिकाओं को बीच अंतर को गठन हो। यो अंतर जंक्शनहरु को प्रोटीन द्वारा बनाईएको छ। ओक्सटोकिनले यी प्रोटीनहरूको संख्या बढाउँछ, यसैले अंतर जंक्शनहरूको संख्यालाई विनियमित गर्दै (34 / 35)।
श्रम को शुरुवात को समयमा, प्रोजेस्टरोन गिरावट र ओक्सीटोकिन एसीटेट को स्तर गर्भाशय को फैलाव को बढावा दि्छ। स्वस्थ प्रभावले श्रमको समयमा अधिक पीडा उत्पन्न गर्दछ र यसैले शरीरले अधिक ओक्सीटोकिनलाई रिहाउन उत्प्रेरित गर्छ, जसले गर्दा बढि बढि र दुखाइको कारणले गर्दा खराब चक्र बच्चाको जन्म दिनको लागि सेट गरिएको छ।
(3) ओक्सटोकिन र दूध चल्ने-डाउन
जन्मजात पछि, अर्को प्राकृतिक कुरा हो कि स्तनपान हुन्छ, एक एक्शन जो ओक्सीटोकिन को अभाव मा हुन सक्दैन। बालबालिकाको चिसो क्रियाकलापले आमाको पछिल्लो भागमा आमाको निपेट गर्छ। एक पटक यो संवेदनशीलता हुन्छ जब, अक्सिको ओक्सटोकिन जारी गर्न को लागी संकेतहरु को दिमाग को हाइकोथोमस को पठायो। यो कार्यले उपयुक्त वातावरणमा ओक्सीटोकिनको वृद्धि बढाउँछ। ओक्सटोकिन परिसंचरणमा यात्रा गर्दछ र दूधलाई छोडिदिने प्रक्रियामा छातीको एभोलीलीको अनुक्रमणिका मांसपेशीहरूलाई "दूध चल्ने-डाउन" भनिन्छ।
3. के ओक्सटोकिन महिलाहरूमा मात्र उपयोगी छ?
सबै भन्दा साधारण प्रश्नहरू जुन मानिसहरू सोध्छन् कि यो हो ओक्सटोकिन पूरक महिलाहरु लाई मात्र फायदेमंद छ। छोटो समयमा, जवाफ कुनै छैन। व्याख्या दिइएकोले तपाईंलाई सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्नेछ किन हामी हामी दुवै genders को लागि ओक्सटोकिन एसीटेट को सेवन को सिफारिश गर्छन।
(1) महिलाहरुमा ओक्सटोकिन
यो हार्मोन महिलाहरु मा धेरै महत्वपूर्ण छ किनकी यो नर्सिंग र जन्म प्रक्रिया मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। श्रम को समयमा, यो गर्भाशय संकुचन को कारण हो र एक वितरित पछि गर्भाशय सिकन मा मदद गर्दछ। जब एक बच्चा चूसने छ, ओक्सटोकिन को रिहाई को उत्तेजित गर्दछ, जो बदले मा बच्चा को लागि दूध को प्रवाह को अनुमति दि्छ। साथै, ओक्सटोकिन आमा-बच्चा बन्धनलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
(2) पुरुषहरूमा ओक्सटोकिन
महिलाहरु जस्तै जस्तै, ओक्स्योटिकिन पुरुषहरुमा सम्बन्ध लाई बढावा दिन्छ। पुर्खाहरूमा गरेको अनुसन्धानमा पाँच महिनासम्म बच्चाहरू भएका थिए, खेलकुद गतिविधिमा वृद्धि भएको थियो कि बुबाहरू र बच्चाहरू निक्कै स्प्रे मार्फत ओक्स्योटिकिन बढावा गर्न पछि लागेका थिए। जो कि ओक्सटोकिन जप भेटिएन तिनीहरूले आफ्नो बच्चाहरु संग नजिकको खेल्नु जस्तो लागेन जस्तो तुलना गरेन।
अर्को अध्ययनमा गरे, अक्सिटोकिन एक निष्ठा बूस्टर साबित भयो किनभने यसले पुरुषहरूलाई रिसाएर राखेको थियो जो आकर्षक महिलाहरु भन्दा टाढाको तुलनामा अक्सियोटिकिन थिएनन्। एकल पुरुषमा कुनै फरक कुरा उल्लेख गरिएको थिएन, र यो मानिएको थियो कि यो उनीहरूको कुनै पनि महिलासँग बाँडिएको थिएन।
ओक्सटोकिन एसीटेटले मानिसहरूमा एक अनियमित असर पुर्याउँछ जुन सोच्न सक्छ कि तिनीहरू उनीहरूको समूहको भाग होइनन्। त्यो हेर्दा जब डच विद्यार्थीहरू औषधिको साथ व्यवस्थापन गरिरहेका थिए र जर्मन वा अरब नामहरूसँग अन्य क्यारेक्टरहरू तुलनात्मक रूपमा फिक्शनल डच क्यारेक्टरहरूको साथ अझ बढी सकारात्मक लागेन। यसैले यो निष्कर्ष निकालेका थिए कि ओक्सटोकिनले उनीहरु को एक भाग को रूप मा अन्य जब बुझ्न को लागी यसलाई बलियो बनाएर सामाजिक सम्बन्धलाई असर गर्छ।
4. ओक्सटोकिन एसीटेट फायदाहरू
यो एक विरोधी भ्रामक हो
अक्सटोकिन अस्तित्वमा प्रभावकारी विरोधी भ्रामक औषधि मध्ये एक हुन सक्छ। यो विशिष्ट साइटोकोइन्स कम गरेर काम गर्दछ, जसमा बारी मा घाँटी उपचार मा मदद गर्दछ यदि एक बाट पीडित हुन्छ।
ओक्सटोकिनले सम्बन्धलाई ठोस बनाउँछ
ओक्सटोकिन एसीटेट स्तरहरूलाई प्रभाव पार्ने चिन्ता हुन्छ जुन तपाइँका प्रियजनहरूसँग तपाईंसँग जोडिएको छ र उनीहरूको वरिपर कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ। एकपटक एक समस्याग्रस्त सम्बन्ध हो भने, तपाईं प्रायजसो जुनसुकै भावना र भावनात्मक उच्चता र ढङ्गबाट ​​गुज्रिरहेका छन्। सुसमाचार एक छ कि ओक्सटोकिन एसीटेट प्रभावहरू के यो एक बढि जोडिएको सम्बन्धको कारण हो।
यसले अनुलग्नकलाई बढाउँछ
यो दिलचस्प छ कि ओक्सटोकिन एसीटेट संलग्नक बढ्छ। गर्भवती महिलाहरु मा एक अध्ययन गरे कि गर्भावस्था को पहिलो तीन महिना को समयमा उच्च स्तर को ओक्सीटोसिन वाला बच्चाहरु लाई जन्म दिए एक पल्ट राम्रो तरिकाले बंधन। ती गर्भवती माथी उच्च तह थियो र पहिलो महिनाको अवधिमा डिलीवरी पछि अधिक व्यवहार लाग्दथ्यो र बच्चाहरु जस्तै लुगा लगाईरहेका छन जसमा अधिक स्नेह र बलियो ब्यान्ड देखाइयो।
भावनात्मक सम्झनाहरूको लागि एम्पलीफायरको रूपमा प्रेरित
ती मनमोहक सम्झनाहरू जुन तपाइँको विगतमा वा तपाईंको सबैभन्दा राम्रो मित्र संग साझा भएकोमा तपाईले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यो कारणले यो के हो जसले तपाईंलाई सुसमाचारको भावना दिन्छ। ओक्सीटोकिनको प्रयोगले मनपर्ने सम्झनाहरू अझ बढ्न सक्छ जुन एक व्यक्तिसँग अर्को व्यक्तिसँग साझेदारी हुन्छ।
पुरुषहरूमा गरिएको अध्ययनले बताए कि ओक्सटोकिनले उनीहरूको आमाबाबुसँग सकारात्मक सम्झनाहरू सम्झन मद्दत गरे। डाउनइडमा, यसले बच्चाहरु को रूप मा बन्धित को लागी नकारात्मक सम्झनाहरु लाई फिर्ता लिन सक्छ। नतिजा, तनाव स्तर माथि जान सक्छ र बदला लिन पनि आवश्यक छ।
यसले आमालाई आमा बनाउँछ
माथि उल्लेखित रूपमा, ओक्सटोकिनले पेसिएन्टाको विभाजनमा सहयोग गर्दछ र रक्तसम्पर्कलाई सम्बोधन गर्दछन् uterus अनुबंध राख्दछ। साथै, दूधको ईजेक्शन को नलिकाहरूबाट अनुमति दिन्छ, यसरी स्तनपानको सुविधा दिन्छ।
यसबाहेक, जन्म दिन पछि ओक्सटोकिनले स्याउको मासु र मासुको बीचमा असीमितता बढाउन मद्दत गर्दछ र एक मात्र अनुहारमा, बिर्सने छैन कि ओक्सटोकिनमा रहेका डाडहरू उनीहरूको बच्चाको कम्पनीको मजा लिन्छन् र कम दुर्व्यवहार हुने सम्भावना छन्।
के अरु कसैको लागि धेरै कुरा भनेको बलिदानबाट रगत खानु जस्तो लाग्छ? खैर, यदि तपाईं केहि उदारतापूर्ण बनाउन चाहानुहुन्छ र तपाईलाई एक जना नेतामा बदल्नुहुन्छ, तब तपाईलाई थाहा छ कि ओक्सटोकिनले के गर्दछ।
यो या तो तपाईं नकारात्मक या सकारात्मक मा असर गर्न सक्छ, तर यो कुरा हो कि ओक्सटोकिन अरूलाई तिरस्कार गर्न सहानुभूति बढाउनु हुनेछ यसैले तपाईलाई तपाइँलाई दिने वा चीजहरू साझा गर्न, कहिलेकाँही व्यक्तिगत लागतमा।
पूरैको रूपमा ओक्सटोकिन एसीटेट
कहिलेकाहीँ शरीरमा ओक्सटोकिन स्तर कम हुन सक्छ, र त्यहाँ प्रभाव पार्नेछ। एक नर्सिंग मातृको लागि, यो अर्थ हो कि त्यहाँ दूध-ईजेक्शन रिफ्लेक्सको रोकथाम हुनेछ यसकारण सानो या कुनै स्तनपान।
कम ओक्सटोकिन स्तरहरू अल्पवाद र स्वतन्त्र स्पेक्ट्रम विकारहरू जस्तै एस्पर्गर सिन्ड्रोमको नेतृत्व गर्न जान्दछन्। यी अवस्थाहरू गरिब सामाजिक प्रकार्यद्वारा चिनिएका छन्। शरीरमा ओक्सटोकिन पूरै गरेर, तपाइँ यी सर्तहरूको उपचारमा एक सफलता पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, तपाईंको प्राकृतिक ओक्सटोकिन भण्डारणले थोडा बढाव रोक्न उदाहरणीय विकारहरूको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
एक यौन भावना बूस्टरको रूपमा
यद्यपि यौन सम्बन्धलाई कुनै सम्बन्धको अभिन्न अंग भनिएको छ, यो अझै पनि केही गर्न सक्छ चुनौती। राम्रो गुणवत्ता सेक्सको कमीले खराब सम्बन्ध पाएको हुन सक्छ, र कुनै आश्चर्य नगर्ने हरेक युगलको लागि केहि चीजको खोजी गर्नु पर्छ उनीहरूको लिबडो आगो लगाउँछन्.
भाग्यवस, Oxytocin ले तपाईंको sagging कामेच्छा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ यसैले तपाईं आफ्नो साथीसँग अधिक गुणस्तरको सेक्सनको मजा लिन अनुमति दिनुहुन्छ। पुरुषहरूमा, यसले क्षमता बढाउँदछ र एक संभोगको समयमा एक सुखद सन्तोष दिन्छ किनकि यो क्षण हो जब यो लोडमा जारी हुन्छ। यो पनि एक पुरुष आफ्नो पोषण व्यवहार को बढावा को माध्यम बाट आफ्नो महिला प्रति एक बढी मायालु बनाउन ज्ञात छ।
त्यहाँ कुनै बहाना छैन किनकि तपाईं ओक्सटोकिन एसीटेटमा एक पटक आफ्नो प्रियजनसँग यौन सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्न (50-56-6); यो ड्रग तपाईले खोज्नु भएको यौन भूख प्रदान गरेर आफ्नो सेक्स ड्राइभ सुधार गर्नेछ।
यसले तनाव घटाउँछ
हामी सबै जान्दछ कि निरन्तर चिन्ताको सक्षम छ; यसले दिमागको शान्तिलाई लुटाउनेछ, तपाईलाई निद्राको लुटाउनुहुनेछ, तपाईलाई झन् झिक्क पार्नुहुन्छ, र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईको क्षणमा जोगाउँछ। यदि यो तपाईंसँग भइरहेको छ भने, तपाईलाई थाहा छ कि तनाव छुट्याउने तरिका हो।
केवल अक्सिटोन एसिनेट ले गरेर मात्र, तपाईं आफ्नो जीवन बाट सिफोन तनाव गर्न सक्नुहुन्छ। यो कारणले गर्दा यो सन्तुष्टिको भावनालाई बुझाउँछ, चिन्ताको कम हुन्छ, र शान्त रहन्छ, खास गरी जब तपाईं साथीको कम्पनीमा हुनुहुन्छ।
तपाईलाई खाँदैछ के बावजूद; वित्तीय दबाब, पारिवारिक विवादहरू, वा भावनात्मक मागहरू, तपाईं अक्सटोकिन पूरकको प्रयोगको साथ केहि आन्तरिक शान्ति उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं मिरर देख्नुभयो वा आफैलाई कमजोर बनाउनुभयो र तपाईंले के गरिरहनु भएको अधिक वजनको बारेमा के सोच्नु भयो भने तपाई ओक्स्योटिकिन प्रयोग गर्न विचार गर्नुपर्दछ। अन्य जीवनशैली परिवर्तन गर्नु बेकार हुन सक्छ, तर ओक्सटोकिन प्रयोग आदर्श समाधान हो जब यो वजन कम गर्न आउँछ।
यो एक रूपमा काम गर्दछ भूख suppressant हाइपोथोममस मा ओक्सटोकिन न्यूरोन्स को माध्यम ले। यदि एकसँग ओक्सियोटोकिन न्यूरोन्स पर्याप्त छैन भने, तिनीहरू अनियन्त्रित फिडिंगबाट पीडित हुने सम्भव छन्, जसले मोटापेक्षाको रूपमा लिनेछ।
यो वजन प्रबंधन मा यो एक उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ कि यसले अक्स्योटोकिन एसीटेट साइड इफेक्ट को कारण हुन्छ र वजन मा मुद्दों मा लाभ को एक विशाल array संग आउछ।
माइग्रेन्सहरूको लागी औषधि
तपाईंको टाउकोमा निरन्तर, धम्की दुखाइ तनावपूर्ण हुन सक्छ। यसले तपाईंको जीवनलाई बिन्दुमा असर पार्न सक्छ जुन तपाईले तपाइँको दैनिक गतिविधिहरू सामान्यतया कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। यसले तपाईंलाई वजन कम गर्न सक्छ, विशेष गरी जब तपाईंसँग सही उपचार छैन र थाहा छैन कि तपाइँ कसरी घटाउन वा दुखाइ कम गर्न सक्नुहुनेछ। ओक्सटोकिन प्रयोगले प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले माइग्रेन्स कम गर्न सक्नुहुनेछ र केहि राहत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
माइक्र्रेन्सहरूको उपचारको रूपमा ओक्सटोकिन एसीटेटका साथ प्रशासनिक रोगहरूको आधाले भनेका छन् कि दुखाइ अरूको चौथाईमा आधा घण्टामा घटाइयो भने उनीहरूले चार घण्टाको प्रयोग पछि माइग्रेन्सको सामना गर्दथे।
लत वा पदार्थ प्रयोग विकार
लत जटिल हुन सक्छ, तर त्यहाँका तरिकाहरू छन् कि कसैले लत लड्न र बाध्यकारी औषधि खोज प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न सक्छ। ओक्सटोकिन एसीटेट रक्सी, ओपियट्स, या हेयोइन प्रयोगकर्ताहरु लाई ठीक गर्न को लागि फायदेमंद छ किनकी यो चिंता को कम गर्दछ। यो पनि शराब र अन्य नशे की लत पदार्थ को फिर्ता लक्षण को कम गर्न मा मदद गर्न सक्छ।
यसले सामाजिक कल्याणलाई सुधार गर्छ
आत्मकथा भएका व्यक्तिहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि ओक्सटोकिन एसीटेटलाई इन्फ्लुङ्ग गर्ने तरिकाले एकअर्कासँग अन्तरक्रिया गर्यो। यसैले यो निष्कर्ष निकालेका थिए कि ती व्यक्तिहरूले यसको सामना गर्नुको कारण ओक्सटोकिनको कम स्तर थियो। यस प्रकार ओक्सटोकिन, संचारमा कठिनाइहरू र साथसाथै सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, यसले अरूको लागि डर कम गर्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमा।
यसले सुरक्षात्मक प्रविधि ट्रिगर गर्दछ
ओक्सटोकिन प्रयोग कुनै पनि मा सुरक्षात्मक प्रवृत्ति बाहिर ल्याउन ज्ञात छ त्यसैले यसैले उनीहरूको `समूहमा 'मा एक भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन। उदाहरणको लागि, ओक्सटोकिनमा एक सैनिकले आफ्नो देशलाई युद्धको सन्दर्भमा सबै साधनहरूको रक्षा गर्नेछ किनभने उनी आफ्ना सँगी नागरिकको लागि केही संलग्नता महसुस गर्छन्।
यसले सुत्न सक्छ
अनिवार्य सबै भन्दा बढी विकारहरू मध्ये एक हो जुन सबै उमेरका मानिसहरूलाई प्रभावित गर्दछ, वरिष्ठहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। यो एक समस्याको जस्तो आवाज हुन सक्छ, तर एक पटक तपाईंसँग दुई हप्ता भन्दा बढीको लागि सुत्न सक्नुहुनेछ, तपाईले थकित, असंगत महसुस गर्नुहुनेछ।
जो कोहीले थोरै राती टिसिङ गर्ने र मोडिन्छ प्रायजसो ओक्सटोकिन एसीटेटलाई प्रयास गर्नुपर्दछ। यही कारण हो कि ओक्सटोकिन Acetate प्रभाव मध्ये एक तपाईंलाई केहि नींद प्राप्त गर्न को लागी हो। Oxytocin काउर्टिसोल प्रभाव काउन्टर यसैले एक शान्त प्रभाव छ कि निस्सन्देह तपाईं केहि पट्टे दिनुहुनेछ। यसको उपयोगको साथ, तपाईंले रातमा तकिया हिर्दा केही सुन्दरीमा केहि समस्या पर्दैन।
5. ओक्सटोकिन साइड इफेक्ट्स
जित्ने ओक्सटोकिन धेरै लाभहरू हुन्छन्, यसको केही जोखिमहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि, यसले सम्बन्ध बढाउन र समुदायहरूको गठन बढाउन सक्छ; यो पनि समूह-समूह र बाहिर-समूह निर्माण गर्न सक्छ कि, बारीमा, पूर्वाग्रह र ईर्ष्याको नेतृत्व गर्दछ।
केही अवस्थामा, यसले बेइमानीलाई बढायो, खास गरी जब झूटो झूटो समूह हो भन्ने समूहले लाभ पुऱ्यायो।
चिकित्सकीय, ओक्सटोकिन प्रयोगले निम्न साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ;
बच्चा जन्मेर पछि ब्लिडिङ
6. के ओक्सटोकिन तपाईंको लागि सुरक्षित छ?
यदि तपाईं जान्नुहुन्छ कि तपाईलाई यो एलर्जी हुन्छ भने यो औषधि लिनबाट बच्नु पर्छ। यदि तपाइँ निम्न सर्तहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने यसलाई लिनुको लागि सुरक्षित हुनुहुन्छ भने डाक्टरलाई बताउनुहोस्;
यदि तपाइँ गर्भवती भन्दा बढी हप्ता भन्दा बढी हप्ता छैन
तपाईंको गर्भाशय वा ग्रीवामा शल्यक्रिया भएको छ (यसमा एक अघिल्लो सी-सेक्शन समावेश छ
सानो पिल्विसको कारणले कडा मेहनत भयो
पाँच वा बढी गर्भावस्थाहरू छन्
एक गंभीर गर्भाशय संक्रमण
एक हृदय ताल विकार
यदि तपाईं स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई तपाईको चिकित्सकलाई सूचित गर्नुपर्छ।
7. अन्य ड्रग्स जो ओक्सियोसिइन एसिनेट को प्रभावित गर्न सक्छ
तपाईंले दिनुभएको केही औषधिले तपाईंको शरीरमा ओक्सटोकिनको प्रभावकारितालाई असर गर्न सक्छ वा एलर्जी प्रतिक्रियाको कारण हुनसक्छ। नतिजाको रूपमा, यदि तपाई ओक्स्योटिकिन प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने तपाईले उनीहरूको प्रयोग रोक्न सक्दछ। तिनीहरू समावेश छन्;
माइग्रेन सिरियाको दुर्व्यवहार जस्ता औषधिको रूपमा औषधिमा क्याफिन औषधि छ
खरानी वा चिसो औषधि जो decongestant, अर्थात्, pseudoephedrine या phenylephrine समावेश गर्दछ
उत्तेजक दबाइहरु, जस्तै, जो एडीएचडी (ध्यान घाटा अतिशैलीकरण विकार) को उपचार गर्न को लागी प्रयोग गरे, Stratella, Ritalin, Daytrana, Concerta, Adderall, र अन्य सहित।
8. प्रशासन र खुट्टाको ओक्सटोकिन एसीटेट मोड
आज, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो ओक्स्योटिकिन एसेटनेट चाहानुहुन्छ। यहाँ केहि छन्;
♦ ओक्सटोकिन इंजेक्शन
प्राय: मान्छेहरू मनपर्छ ओक्सटोकिन इंजेक्शनहरू किनकी उनीहरूले अझ बढी प्रभावकारी हुन थाले। प्रेमी महिलाहरुले यसलाई प्रयोगको क्रममा संकुचन शुरु गर्न र सुधार गर्ने तरिकाको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यो गर्भावस्था समाप्त गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
चूंकि इंजेक्शन धेरै साइड इफेक्ट्स संग आउन सक्छ, उनलाई उनलाई प्रयोग गर्दा अतिरिक्त सावधानी अभ्यास गर्न को सल्लाह दिइएको छ।
♦ ओक्सटोकिन गोलहरू
यो सबै भन्दा अचम्मलाग्दो तरिका हो जुन धेरै मानिसहरू आफ्नो ओक्सटोकिन चाहन्छन्।
♦ ओक्सटोकिन नाक स्प्रे
ओक्सटोकिन इंजेक्शन र ओक्सटोकिन गोलीको विपरीत, ओक्सटोकिन नाक स्प्रे छिटो काम गर्दछ किनकी यो रक्तचाप मा मस्तिष्क सम्म पुग्छ। प्रायः, मानसिक स्प्रेबाट पीडित रोगहरूमा नाक स्प्रे प्रयोग गरिन्छ।
♦ ओक्सटोकिन स्प्रे
यस स्प्रे सँगको फाइदा यो हो कि तपाइँ यसलाई कुनै पनि अन्य निकाय स्प्रे जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई मात्र यो क्षेत्रमा लागू गर्नु आवश्यक छ जुन तपाइँसँग सबैभन्दा सजिलो छ, र तपाईंले फाइदाहरू कटौती गर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, केही व्यक्तिहरूले गर्दन क्षेत्र र कलरको वरिपरी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जब अन्यले आफ्नो तकिया, कम्पास, स्कार्फ र कपडामा स्प्रेइङलाई मनपर्छ।
सबै मा, यो जादू काम गर्दछ, विशेष गरी विश्वास निर्माण गर्न र अरूसँग बलियो बन्धनमा।
♦ ओक्सटोकिन हार
हामीमध्ये धेरैले गहना लगाउने मन पराउँछन्, र सुसमाचार यो हो कि तपाई ओक्सटोकिनबाट बनेका विभिन्न प्रकारका हुन सक्नुहुनेछ। आजकल, धेरै अनलाइन पसलहरू प्रस्ताव गर्दै छन् ओक्सीटोकिन हार विभिन्न प्रकारका ढाँचामा। अझ बढी, तपाईं लम्बाई र यो सामग्री जुन तपाईले चाहानु भएको छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, यानी, प्लेटिनम, सुन, वा चाँदी।
♦ ओक्सटोकिन एन्टिडोट
एन्टिडोटमा नियन्त्रण खुराकहरूमा प्रणालीमा अन्तराष्ट्रिय रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ। उदाहरणको लागि, जब श्रमलाई उत्प्रेरित गरिन्छ, प्रति मिनेट 2milliunits को IV इन्फ्यूजन साठ मिनेट अन्तरालहरूमा दिइएको छ।
ओक्सटोकिन एन्टिडोट शक्तिशाली छ र एकपटक इन्जेक्शन मृत्यु हुन सक्छ। यो Autism व्यवस्थापन मा पनि उपयोगी छ।
♦ ओक्सटोकिन ट्याटू
कहिलेकाँही सोचेको थियो कि तपाईं मा एक अणु टटू हुन सक्छ ताकि तपाईं मोडा महसुस गर्दा केहि अतिरिक्त हुन सक्छ? यदि यो मामला हो भने, एक ओक्सटोकिन ट्याटुमा तपाईंको बाल्टी सूचीमा हुनुपर्दछ। यो अवसाद, दुखाइ, र सामाजिक डरहरू कम गर्न एक सही तरिका हो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको साथीहरूले बढि उदारताको लागि तपाईंलाई प्रशंसा गर्नेछ।
♦ ओक्सटोकिन पूरक
ओक्सटोकिन पूरक काउंटर ड्रग्स भन्दा माथि छ जुन प्रायः यौन आनन्द र चासो बढाउन प्रयोग गरिन्छ। यो पनि वजन व्यवस्थापन मा प्रयोग गर्दछ र यस रोग को समयमा दूध को प्रवाह बढन को रूप मा।
√ यसले मेरो अवसाद ठीक पारेको छ
जर्ज भन्छन्, "एक व्यक्ति जसले लगभग दस वर्षको लागि डिप्रेसन संग संघर्ष गरेको छ, म भन्न चाहन्छु कि यो औषधि जादुई छ। यो मलाई सहकर्मी संग लडेको दुई सहकर्मीहरूले मलाई प्रशंसा गरेको थियो। यसको प्रयोग गर्नु अघि, मैले सबै प्रकारको दबाइ प्रयोग गरेको थिएँ र धेरै डाक्टरहरू र चिकित्सकहरू खोजे, र कसैले काम गर्न लागेन। तथापि, सबै परिवर्तन भएको छ। म अब मेरो पत्नी र बच्चाहरूको कम्पनीको आनन्द उठाउँछु, जब म एक्लै रहन मन लाग्यो। खैर, म महसुस गर्छु म पूर्णतया ठीक हुन्छु किनभने मैले कहिल्यै उदासीन महसुस गरेन। मेरो ऊर्जा, आत्मविश्वास र आनन्द फिर्ता आउँछ; ओक्सटोकिन एसीटेटको लागि धन्यवाद। "
√ सेक्स र अग्रपोस्ट बूस्टरको लागि उत्तम विकल्प
टेरी भन्छन्, "के तपाईं आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईको यौन जीवन बोरिंग गर्दैछ? यदि तपाईंले आफ्नो अग्रगामी मजा बनाउने प्रयास गर्नुभयो तर असफल भएन किनकि तपाई अब तपाईको पार्टनरको लागि धेरै स्नेह महसुस गर्नुहुन्न, त्यसपछि तपाईले यो प्रयास गर्नुपर्छ। ओक्सटोकिन एक उत्कृष्ट खरीद भएको छ जसले मेरो यौन जीवनलाई पूर्ण मोड-वरपर दिएको छ। मेरो पति र म अब तीस वर्षको उमेरमा महसुस गर्दछु र हाम्रो मायाको हरेक बिसाको आनन्द लिनुहोस्। म यसलाई सिफारिस गर्छु। "
√ उत्तम दुखाइ रिवाइन्डर
जोनाथन भन्छन्, "अब यो ले यो प्रयोग गरिरहेको छु, र म सोच्दैन कि म यसलाई केहिको लागि व्यापार गर्नेछु। मैले पत्ता लगाए कि यो माइग्रेन्समा मद्दत गर्दछ, यो मेरो जाने-औषधि बन्न गएको छ। म अब सबै दिन दुखाइ पीडित छैन। Oxytocin Acetate मलाई मिल्यो! "
के तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईंको अक्सिटोन स्तर बढाउन आवश्यक छ? के तपाईं एक राम्रो मूड गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईंको चिन्ता र तनाव बिर्सनु हुन्छ? के तपाईंले कुनै विशेष देख्नुभएको छ र महसुस गर्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईं उनीहरूको साथ हरेक क्षण खर्च गर्न चाहानुहुन्छ? तर तपाईंले कहिलेकाहीँ बांडको जस्तो बलियो जस्तो महसुस गर्नुभएको छ।
लेखमा देखिए जस्तै, ओक्सटोकिन एसीटेट तपाईंले सबैभन्दा ठूलो हतियार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाई उत्कृष्ट गुणवत्ताको साथमा उत्कृष्ट खानेकुरा, चलचित्र, र यौन मितिहरू सिर्जना गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाई सँगै गुणवत्ता समय बिताउनुहुन्छ। तर तपाईं स्टोरमा हिड्न चाहानुहुन्छ र मूल्य निर्धारण र गुण जस्ता केहि कारकहरू विचार नगरी ओक्सटोकिन पूरकको लागि सोध्न चाहानुहुन्छ। त्यसो त तपाई आफ्नो ओक्सटोकिन एसीटेट (50-56-6) कहाँ हुनुहुन्छ?
पूरै उद्योग बढ्दै हरेक दिन, त्यहाँ केहि विक्रेताहरु तपाईं के लागि आदेश दिने वितरित नगर्ने संभावना छ। दुर्भाग्यवश निश्चितता यो हो कि तपाई केवल ओक्स्योटिक अ Acetate खरीद गर्न को लागी duped प्राप्त गर्न सक्छ कि यसको प्रभावशीलता र सुरक्षा को संदर्भ मा नहीं हुनेछ। एक उत्पाद को खरीद गर्न को लागी एक मात्र तरीका हो कि भरणकर्ताहरु संग भरी हो कि ओक्स्योटिकिन एसीटेट आपूर्तिकर्ता हो कि तपाईं मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी एक विश्वसनीय छौं ओक्सटोकिन एसीटेट निर्माता जसले तपाईंलाई अक्सिटोन एसिसेट को गुणस्तरको साथै साथसाथै तपाईंको व्यक्तिगत प्रयोगको लागि प्रदान गर्दछ। हाम्रो ओक्सटोकिन मूल्य अनुकूल छ, र तपाईंले हामीलाई हुन सक्नुभएका कुनै प्रश्नहरूको लागि हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ।
यो स्पष्ट छ कि ओक्सटोकिन भनेको हो कि हामीलाई मानव बनाउँछ। हामी बिना यो भावनाहरू थिएन, र हामीले के गर्दैछौं। अरूलाई प्रेम गर्ने, हेरचाह गर्ने, र फैलाउने क्षमता चाहिँदैन।
ओक्सटोकिन न केवल अवसादबाट पीडित एक प्रभावी औषधि साबित भएको छ तर कसैलाई जो सामाजिक सुधार गर्न चाहन्छ। व्यवसाय प्रबन्धकहरू, कर्मचारीहरू र ओक्सटोकिनमा भएका बिक्रीकर्ताहरूले उनीहरूको तुलनामा थप सम्झौताहरू हराएका थिए।
तपाइँले पनि ध्यान दिनुहुन्छ कि ओक्सटोकिन एसेटेटले हाम्रो भलाइलाई असर गर्ने विभिन्न परिस्थितिहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले के तपाईं पर्खिरहेका हुन सक्नुहुन्छ? यसको लागि अर्डर र पूर्णतया मानव हुनुको आनन्द।
2019-06-12 10 मा: 32
कस्तो भयानक लेख! लेख पाठक को लागि धेरै जानकारीपूर्ण र उपयोगी छ। यसलाई प्रेम गर्नुहोस् र अधिकको लागि फिर्ता आउनेछ। धन्यवाद PHCOKER।